Ekpere ọbụ abụ kpere mgbe a na-akpagbu ya
“M tụkwasịrị Chineke obi” (4)
“Gbanye anya mmiri m n’ime karama akpụkpọ gị” (8)
“Gịnị ka mmadụ efu ga-eme m?” (4, 11)
Ntụziaka e nyere onye na-eduzi abụ. A ga-eji ụda a na-akpọ “Nduru Na-anaghị Ekwu Okwu nke Nọ n’Ebe Dị Anya” kpọọ ya. Abụ Devid. Miktam.* Mgbe ndị Filistia jidere ya n’obodo Gat.+ 56 Chineke, biko, meere m amara n’ihi na mmadụ efu na-emegide m. Ha na-alụso m ọgụ ma na-emegbu m kwa ụbọchị. 2 Ndị iro m na-emegide m ụbọchị niile. Ọtụtụ ndị na-alụso m ọgụ maka na ha dị mpako. 3 Ụjọ tụwa m,+ m na-atụkwasị gị obi.+ 4 Ọ bụ Chineke, onye m na-eto n’ihi ihe o kwuru, ka m tụkwasịrị obi. M tụkwasịrị Chineke obi; egwu anaghị atụ m. Gịnị ka mmadụ nkịtị* ga-eme m?+ 5 Kwa ụbọchị, ha na-emebiri m ihe. Naanị ihe ha na-eche n’echiche bụ ime m ihe ọjọọ.+ 6 Ha na-aga zoo ka ha kpara m aka. Anya ha anaghị apụ apụ n’ebe m nọ,+Ha na-achọ otú ha ga-esi gbuo m.*+ 7 Jụ ha n’ihi ihe ọjọọ ha na-eme. Chineke, jiri iwe kwatuo mba dị iche iche.+ 8 Ị ma otú m si na-awagharị ebe niile.+ Biko, gbanye anya mmiri m n’ime karama akpụkpọ gị.+ Ọ̀ bụ na i deghị ha n’akwụkwọ gị?+ 9 Ndị iro m ga-agbaghachi azụ n’ụbọchị m ga-akpọ gị ka i nyere m aka.+ Obi siri m ike na Chineke nọnyeere m.+ 10 Ọ bụ Chineke, onye m na-eto n’ihi ihe o kwuru, ka m tụkwasịrị obi. Ọ bụ Jehova, onye m na-eto n’ihi ihe o kwuru, ka m tụkwasịrị obi. 11 M tụkwasịrị Chineke obi; egwu anaghị atụ m.+ Gịnị ka mmadụ nkịtị ga-eme m?+ 12 Chineke, m ga-emezurịrị nkwa m kwere gị.+ M ga-ekele gị.+ 13 N’ihi na ị napụtara m* n’aka ọnwụ,+I kweghịkwa ka m kpọbie ụkwụ,+Ka m wee dịrị ndụ na-ejegharị n’ihu Chineke.+
^ Na Hibru, “mkpụrụ obi m.”